မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင် အာရှနေဝန်း အာဇာနည် ဆရာတော် အသျှင် ဥတ္တမ ~ The Light of Asia
Home » အတ္ထုပ္ပတ္တိ , ဆောင်းပါး » မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင် အာရှနေဝန်း အာဇာနည် ဆရာတော် အသျှင် ဥတ္တမ
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင် အာရှနေဝန်း အာဇာနည် ဆရာတော် အသျှင် ဥတ္တမ
00:54 အတ္ထုပ္ပတ္တိ, ဆောင်းပါး No comments
ဗမာ့ခေတ် ဦးဘရင် ရေးသားသည့် ဆရာတော်အသျှင် ဥတ္တမ(လွတ်လပ်ရေးစိတ်
ဓာတ်မျိုးစေ့ချခဲ့သူ) စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုမိသည်။ အခန်း ၁ တွင် ငယ်စဉ်ကာလ
ခေါင်းစဉ် ဖြင့် ဤသို့စတင်ရေးသားထားသည်......
ကြားတတ်မြောက်သူတို့အားအလွန်မြင့်သောအဆင့်အတန်းဖြငအခွင့်အရေးပေး ကြရာ အင်္ဂလိပ်စာပေစကားတတ်မြောက်သူအလွန်နည်းပါေးသာခေတ်က တဦးတလေတတ်မြောက်လာခဲ့သော် ထိုသူသာလျှင် ဘုရားထူးခံမင်းယောကျာ်းဖြစ်သွားရပြန်၏။သို့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်စကား၊ အင်္ဂလိပ်စာပေကိုဘဝရှင်မင်းတုံးမင်းကြီးလက်ထက်က နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်ဟူ၍ မလွှတ်ရသေးမီကင် ရခိုင်ပြည်၌အင်္ဂလိပ်စာတတ် ပညာရှင်များ ပထမဦးစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့လေသည်။
အင်္ဂလိပ်ပညာကိုလည်းတတ်နိုင်သော မိဘများက အိန္ဒိယပြည်၊ ကာလကတ္တားသို့ ရောက်အောင်ပင်ပို့၍ သင်ကြားကြရာ အင်္ဂလိပ်အစိုးရဌာနများတွင် ရခိုင်လူမျိုးပညာရှိများကို အထူးအခွင့်အရေးပေး၍ ခန့်ထားခဲ့လေသည်။ဦးထွန်းကြံဆိုသူယခုဗမာထဲမှပထမဆုံးအိုင်စီအက်စ်ဦးကျော်မင်း၏ဖခင်သည်ဗမာထဲမှပထမဆုံးဘီအေဘီအယ်လ်ဝတ်လုံအတတ်ကိုအောင်မြင်ခဲ့သဖြင့်ရခိုင်ပြည်၌အထူးကျော်ကြားခဲ့သည်။ရခိုင်ပြည်၊ဗမာပြည်တို့တွင်ထို့သို့အင်္ဂလိပ်ပညာတတ်များရေပန်းစားကာခေတ်ရှေ့ကသွားလျက်နေသောမြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၄၁ခု နှစ် သီဘောဘုရင်မန္တလေးနေပြည်တော်၌ စိုးစံလျက်ရှိနေစဉ်အခါတွင် ဦးဥတ္တမအား ဖွားမြင်ခဲ့လေသည်။
ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၁)ရက် တနင်္လာနေ့သားဖြစ်ပြီး၊အမည်မှာ ပေါ်ထွန်းအောင်ဖြစ်လေသည်။ အဖဦးမြနှင့်အမိ မိအောင်ကျော်သူ ဖြစ်သည်။ မိခင်ဖြစ်သူသည် သားကြီးကိုမမွေးဖွားမီ ညအိပ်မက်ထဲတွင် -(အမလေး ကြယ်ကြီး တစ်လုံးက လှလိုက်ပါဘိ-)လို့ ဝမ်းသာအားရပြောဆိုနေစဉ် ဦးမြ နှိုးလိုက်မှ
နိုးလာပါသည်။ လင်ယောကျာ်းဖြစ်သူကမေးမြန်းကြည့်သည့်အခါ-ဤ အိမ်မက်က
ကြီးကျယ် လိုက်တာ၊ ကျမ အိမ်နောက်ဖေးက ကြမ်းပြင်မှာ လသာနေလို့ ဗိုင်းငင်
နေစဉ် ကောင်းကင်ထက်ကအလွန်တရာကြီးမားသည့်ကြယ်ကြီး တစ်လုံးမှာတဖြည်း ဖြည်းချင့်း အောက်သို့ကြွေကျလာသည့်အခါ လူတွေအများကြီး ဝိုင်းအုံလို့ကြည့်ကြတယ်။ အုတ်အုတ်ကျွက်ကျွက် လဲဖြစ်သွားတယ်။ သူတို့နှင့်အတူ ကျမလဲကြည့်ပါ တယ်။ ယင်းကြယ်ကြီးဟာ ကျမရှေ့တည့်တည့်ကိုကျလာတဲ့အခါ ကျမကကောက်ကြည့်ပြီးတော့ လှလိုက်တာ ဟေ လို့ နှုတ်ကပြောမိ သွားတယ်-လို့ပြန်ရှင်းပြပါသည်။ ဒီလိုပြောဆိုနေကြည်ကိုတဘက်အခန်းမှာအိပ်နေတဲ့ မိအောင်ကျော်သူ၏အမေ ကကြားသွားတဲ့အတွက့်- အား-ဒီ အိပ်မက်က သာမန် အိပ်မက်မဟုတ်ပါကား၊ ငါ့သမီးမှာ အလွန်တရာမြင့်မြတ်ပြီးအကျင့်သီလရှိသော သားယောကျာ်း တစ်ယောက် မွေးဖွားမည်ဟုထင်ကြောင်း၊ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ကြယ်တစ်လုံးဆိုသည့်အတွက် သူတော်
သူမြတ်ရဟန်းဘဝမှာပျော်မွေ့မည့် သားမြတ်ရတနာဖြစ်လိမ့်မည် လို့နိမိတ်ဖတ်ကြ
(ယင်းအချိန်က ရခိုင်ပြည်တွင် သီတင်းကျွတ်ပွဲမှာ ဝတ်ဆင်ရန်တော်သလင်း လတွင် တစ်ကြိမ်၊ သင်္ကြန်ပွဲတော်အခါဝတ်ဆင်ရန် တပေါင်းလတွင်တစ်ကြိမ်
ခြည်ရက္ကန်းယက်သည့် ပွဲသဘင် ထုံးစံရှိသည်ဟုသိရပါသည်)။
ဆရာတော်ကြီးနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာမှကိုယ်တွေ့မျက်မြင်ဖူးသူတို့က အဖြစ်မှန်များအပေါ်မှာ အကျယ်တဝင့်ရေးသားထားကြပါသည်။။ ဆရာတော်ကြီး၏ အမျိုးဘာသာ သာသနာအကျိုးဆောင်ရွက်ချက်များကို အကျယ်ချဲ့တင်ပြစရာ မလို၊ လူတိုင်းအသိပင်ဖြစ်သည့်အတွက် အကြောင်းအရာတချို့ကိုသာ ဖော်ပြပါမည်။
သည်။။ ဆရာတော်၏ဦးရီးတော် ဦးချင်းခိုင်နှင့်အဒေါ် ဒေါ်စံလှဖြူတို့နှစ်ဦး မျက်စိ
ရောဂါကုသရန် ကာလကတ္တားသို့ရောက်လာပါသည်။ ကာလကတ္တားက ရခိုင်ပွဲစား ကြီးအိမ်မှာတည်းခိုကြသည်။ တစ်နေ့သောအခါ ဆရာတော်သည် ကြေးနန်းစာရွက် (၁)ရွက်ကိုင်ပြီး ရယ်လို့မြူးလို့ကြွလာပါသည်။ ထိုအခြင်းအရာကိုမြင်သော အဒေါ်ဒေါ်စံလှဖြူက-ကိုယ်တော်လေး ဒီတခါ ရယ်လို့ပြုံးလို့ပါလား၊ ဘာတွေကိုသဘော ကျလို့လာပါသလဲ-လို့ မေးလိုက်ပါသည်။ ဆရာတော်က ချက်ချင်းပင် ဖြေလိုက် တာက-ဒကာမကြီး၊ ဒီတခါတော့ ငါ့ကိုယ်ငါ သေပျော်ပါပြီလို့ ဝမ်းသာအားရနဲ့
ပြုံးလို့ရယ်လို့လာတာဖြစ်တယ်-လို့မိန့်လိုက်ပါသတဲ့။ အဒေါ်က-ဘယ်လို ဘယ်လို
လူစိတ်ရှိလာကြပြီ၊ ဒီလို လူစိတ်ရှိလာလို့ ငါ ဝမ်းသာတာပါ-လို့မိန့်တယ်လို့ဆိုပါ
တယ်။ လူစိတ်ရှိတယ် ဆိုတာက ဒီလို လေ၊ လူတွေဟာ လူ့အခွင့်အရေးဆို တာ
ဘာလဲ ဆိုသည်ကို နားလည်လာကြတယ်။ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကိုယ်သိပြီးတော့မရ ရအောင်ကြိုးစားလာတတ်သည်ကို ကိုယ်တော်က လူစိတ်ရှိတယ်လို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်တယ်။ဟော- အခု ရန်ကုန်မှာကျောင်းသားတွေကစပြီးတော့ အင်္ဂလိပ် ကျောင်း
တွေက သင်ပေးတဲ့ပညာကို မကျေနပ်လို့ သပိတ်မှောက်ကုန်ကြပြီတဲ့။ ကိုယ်တော် ထံက အကြံဥာဏ်တွေယူချင်လို့ ကိုယ်တော်ကို ရန်ကုန်သို့ကြွလာပါလို့ ရန်ကုန်မြို့ က တကာတွေ ပင့်လျှောက်တဲ့ကြေးနန်းစာဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဒီလို
စိတ်ဓာတ်ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ပြီးကိုယ်တော်ကြိုးစားနေတာ ယခုတော့ ကြိုးစားရကျိုး နပ်ပြီ။ ဒါနဲ့ ကိုယ်တော်က သေပျော်ပြီလို့ပြောတာ-ဆိုတဲ့အခါမှ ဦးရီးနဲ့အဒေါ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားကြပါသည်။
မှာမန္တလေးမြို့အိန္ဒိယအမျိုးသားရို့၏ကိုယ်စားလှယ်အမတ်မစ္စတာဂန်ဂါဆင်းက ဆရာ တော်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်ပြ တင်ပြချက်ကို အမတ်အားလုံးကပင် သဘောတူထောက်ခံ ခဲ့ကြသည်ဟုသိရပါသည်-----
“ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသည် ဤနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးသောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီး
ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သောထိုစကားရပ်သည် အပိုမပါသည့်စကားဖြစ်ပါသည်။
သူသည် မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးကို အစပြုလာသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး၊မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်
မှုဟူမျှသည်လည်း သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးမှ ပေါ်လာတာဖြစ်တယ် လို့ ကျွန်ုပ်က
မြန်မာအချင်းချင်းကူညီကြရန် ဝံသာနုရက္ခိတတရား နှင့်ပတ်သက်၍ လည်း
“မိန်းကလးများသည်မင်းကတော်စိုးကတော်ဖြစ်ဖို့ရန်ကိုသာရည်မှန်းပြီးဂုဏ်ပြိုင်နေကြတယ်။ ဒီလို မိန်းမတွေ စည်းမစောင့်နိုင်ကြလို့ မြန်မာတွေ ကျွန်သက်ရှည် နေ
တာ။ဘုန်းကြီးတွေကလဲ ဆွမ်းခံတော့မြန်မာအိမ်မှာခံတယ်၊ပစ္စည်းဝယ်တဲ့ခါ ရိုးကုန်တိုက်မှာ သွားဝယ်ကြတယ်။ ငါ မအူပင်မှာ ထောင်ကျတာ(၏)ဆိုတဲ့ စကား
တစ်လုံးပါမသွားလို့ ကျတာ ဖြစ်တယ်။ငါက ပြောတယ်၊မြန်မာတွေဟာ အရေးပိုင်
ဆိုရင် တော်တော်ကိုကြောက်ကြတယ်။ဝန်ထောက်၊မြို့အုပ်ဆိုရင်လဲ ကြောက်နေကြတယ်၊ ကိုယ်တို့က မဟုတ်မမှန်တာကို မလုပ်ဘဲနဲ့ပြန်မပြော ဝံ့ကြ။ ခွေးလောက်တောင် မလိမ္မာကြ။ မင်းတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့
ခွေးဝင်စားပင်ဖြစ်ဖြစ်၊ အရေးပိုင် ခွေးနဲ့တွေ့ရင် ခံလို့တော့ ကိုက်ရမှာပေါ့-လို့ ငါကပြောတယ်။အဲဒီလို ပြောတာကို အရေးပိုင်က သူ့ကို ခွေးလို့ပြောရမလားဆိုပြီးတရားစွဲတာဖြစ်တယ်။အရေးပိုင်၏ခွေး
လို့ ပြောရမှာကို ငါက အရေးပိုင် ခွေး လို့ပြောလိုက်မိတာ မဟုတ်လား။”
ရန်ကုန်မြို့၊အင်းစိန် ထောက်လှမ်းရေးဌာန(CID., Burma) အစီရင်ခံစာမှာ
ဤသို့ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်ကို ဖတ်ရှုရမိပါသည်----
“ဦးဥတ္တမသည်ထက်မြက်သောဥာဏ်စွမ်းရှိရုံမျှသာမကအင်အားကြီးမားပြီးတွန်းအားလည်း ကြီးမားလှသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ပြောမကုန်နိုင်
လောက်အောင်စိတ်အားခိုင်မာခက်ထန်ပြီး အလွန်အကျွံခေါင်းမာသူ တဦးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရန်ကြိုးပမ်းရာတွင် ဖြစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းအားလုံးဖြင့် လုပ်မည့်သူဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး လူထုများအတွင်း အများကြိုက်၊ ပျိုတိုင်းကြိုက် ဖြစ်နေခြင်း၊သင်္ကန်းဝတ်လျက်နေခြင်း၊ အလွန်အစွန်းရောက်သော အယူများရှိနေခြင်းစသည်တို့
ဆရာကြီးဂိုအင်ကာ ငယ်စဉ်ကကျောင်းမှာပညာသင်ကြားနေစဉ်အခါ ဆရာ
တော်အကြောင်းကို ဖတ်ရပါသည်။ သူ့ကိုသင်ပြသည့် ကျောင်းဆရာက ဦးဥတ္တမ
အကြောင်းကို ကဗျာတပုဒ်ရေးသားသီဖွဲ့ပေးဖူးပါသည်။ ယင်းကဗျာကို ဆရာကြီး
ဂိုအင်ကာ အမြဲတန်းမှတ်မိနေပါသည်။ကဗျာပါအတိုင်းဆရာတော်ကို ကျောင်းသား
အားလုံး လေးလေး စားစား ဂုဏ်ယူကြပါသည်အသင်သည် ---
ထိုနည်းတူ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဥတ္တမ ဖြစ်ပါစေ”
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမဟာ ကျိုတိုမြို့ (Kyoto)京都 တွင်ရှိသော ရိယုခိုခု တက္ကသိုလ် (Ryukoku University)龍谷 大学 တွင် ၁၉၀၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၁၀ ခုနှစ်ထိ ဂျပန်ဘာသာကို သင်ယူရင်း၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူဘာသာကို သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ (အဲ့ဒီအချိန်က တက္ကသိုလ်ရဲ့ နာမည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ် (Bukkyo University)仏教大学 ဖြစ်တယ်ပါတယ်။)
တိုကျိုတေးခိုခုတက္ကသိုလ် (Tokyo Teikoku University) 東京帝国大学 တွင်လည်း ပါဠိဘာသာကိုသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်။
愛知県, 名古屋市千種区, 法王町2丁目5番地21. 揚輝荘
Aichi-ken, Nagoya-shi, Chitane-ku, Hōō-chō 2-5-21, Yōkisō.
Tel ; 0527594450
၁၉၁၃ ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမဟာ ညီမဖြစ်သူ မမေအိမ်စိုး အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာတော်သင် ကျောင်းသား ၆ ယောက်ကို ဂျပန်တွင် ပညာသင်ကြားရန် စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
အရှင်ခေမာစာရ၊ ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂက ၆-၉-၂ဝဝ၂ နေ့ထုတ်ဝေသည့် ရခိုင်
သတင်းစဉ် အတွဲ(၁)တွင်ဆရာတော်ကြီးပျံလွန်တော်မူရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆရာ တော်ကိုယ်နှိုက်ကကံဆိုးသည် လားမပြောတတ်၊ ပျံလွန်တော်မမူခင်ကဆရာတော် ကို မည်သူကမျှစောင့်ရှောက်မည့်သူမရှိပါ။ သတင်းစာတိုက်ကအပြန် သိမ်ဖြူ လမ်း ဘေးမှာ လဲနေလို့ သခင်လွင်က တွေ့သည်နှင့် သူ့ ကားဖြင့်ပင် ပင့်ယူလာပြီး
ပြောဖူးကြောင်း ရေးသားထားပါသည်။ သခင်လွင်၏ ဦးဥတ္တမ မိန့်ခွန်းများနိဒါန်းတွင် သေသေ ချာချာရေးသားထားသည်ဟုဆိုပါသည်။
အသျှင်ခေမာစာရ၏အတွေ့အကြုံ။ ။ ဆရာတော်ကြီးကိုဂုဏ်ပြုထားတဲ့ ဦးဥတ္တမပန်းခြံဆိုတာကိုလည်း ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲဒီမှာဝမ်းနည်းစရာတခုက တော့ ဆရာတော်ရဲ့ကြေးရုပ်၊ကျောက်တိုင် တခုခုပေါ့၊အဲဒါတွေ ဘာမှမရှိဘူး။ဒါဟာနိုင်ငံတော်နဲ့ ဆိုင် သလား၊အမျိုးသားရေး၊ လူမျိုးရေးနဲ့ဆိုင်သလား ဆိုပြီး၊နည်းနည်းကလေး စပ်စု ခဲ့ပါသေးတယ်။တိတိကျကျတော့မသိရပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သိရတာကတော့ လုပ်ခွင့်မရလို့ မလုပ်တာ-ဆိုပြီး မထင်မရှားသိခဲ့ရတယ်။ပိုပြီးဆိုးတာက (၁၉၇၄) ခုမှာ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ် ဦးသန့်ဈာပန အရေးတော်ပုံဖြစ်တော့၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရက(အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရ)ရေဒီယိုကနေပြီး (ကန်တော်မင်ပန်းခြံမှာဦးသန့်ရဲ့ဂူဗိမာန် ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း)ကြေညာချက်ပါပဲ။ နိုင်ငံတော် အစိုးရဆိုတဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအစိုးရက ယခင်က သမိုင်းဝင်-ဦးဥတ္တမပန်းခြံ-လို့
သုံးစွဲနေတာ ဒီနေ့ ဒီအချိန်ကျမှ- ကန်တော်မင်ပန်းခြံ-လို့ ထ ကြေညာလိုက်တာ
ဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အဖြေဂဃနဏမသိရဘူး။နောက်ပြီးအခြေအတင် ဆွေးနွေးစရာမလိုဘဲ ဆန္ဒခံယူမှုမလုပ်ဘဲ ဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရတာဟာ နိုင်ငံတော် သိက္ခာနှင့်နိုင်ငံတော်တခုတည်တံ့ဖို့အတွက် အင်မတန် စိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွင်း သမိုင်းဝင်တာကို သမိုင်းမဝင်၊ သမိုင်း မဝင်တာကို သမိုင်းဝင်ကပြောင်းကပြန်ဖြစ်အောင် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုတစုမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီး၊
အဲဒီတုန်းက လှေနံဓားထစ် မှတ်ထားဟန်လဲရှိတယ်ထင်တယ်။
ချုပ်ပြောရရင်တော့ဒါဟာဦးဥတ္တမဆိုတာမရှိဘူး၊ဂုဏ်ပြုစရာလည်းမလိုဘူး၊နိုင်ငံတော်အဆင့် ဂုဏ်ပြုခံမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘော သက်ရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက အရေးတော်ပုံခေါင်းဆောင်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေက ချက်ချင်းဆိုသလို- မြန်မာနိုင်ငံမှာကန်တော်မင်ပန်းခြံဆိုတာမရှိဘူး၊ ဦးဥတ္တမပန်းခြံဆိုတာဘဲရှိပါတယ် ဆိုပြီး၊တန်ပြန်
ကြေညာချက်ထုတ်တာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဒီတော့ မဆလစစ်အုပ်စုကကြေညာ ထားတာ အတည်ဖြစ်သွားသလား၊ ကျောင်းသားတွေကြေညာတာ အတည်ဖြစ်သွား
သလား၊ဒီနေ့အထိ စာရေးသူ မသိဘူး။ဆရာတော်ကိုယ်နှိုက်က ကံဆိုးလေသလား မပြောတတ်ဘူး။ပျံလွန်တော်မမူခင် ဘယ်သူမှပြုစုစောင့်ရှောက်မဲ့သူမရှိဘူး။ ပျံလွန် တော်မူပြီးနောက်၊ အထိမ်းအမှတ်ပန်းခြံ၊ ကြေးရုပ်တု၊ကျောက်ရုပ်တု၊ ကျောက်တိုင်၊
လမ်း စတာတွေကို နိုင်ငံတော်က ပြုလုပ်ဂုဏ်ပြုထားတာမရှိဘူး။ ဒေသခံတွေ
အပြောအရ၊အဲဒီလိုဂုဏ်ပြုကြေးရုပ်တု၊ ကျောက် ရုပ်တု၊ကျောက်တိုင်တွေပြုလုပ်ဖို့
ကြိုးစားတာတောင် ပိတ်ပင်တာတို့၊ ခြိမ်းခြောက်တာတို့ ခံခဲ့ရတယ် ဆိုတယ်၊
ဖဆပလအစိုးရ လက်ထက်က ကန်တော်မင်ပန်းခြံကို မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင် အာရှနေဝန်းအသျှင် ဥတ္တမပန်းခြံအဖြစ် တရားဝင်သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။တည်ဆောက်မည့် ကျောက်တိုင်ပုံစံကိုဦးဥတ္တမကျောက်တိုင်အဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားပြီးလျှင် ပန်းပုဆရာကြီး ဦးဟန်တင်ကိုယ်တိုင် အသျှင်ဥတ္တမရုပ်တုတော် ကိုထုဆစ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဤသို့လုပ်တောင်ထားသည်ကို ဗိုလ်နေဝင်းကစစ်အာဏာ ဖြင့် ဖျက်ဆီးလိုက်သည့်အတွက် ထုလုပ်ထားပြီးသည့်ရုပ်တုတော်ကိုပင် ဝှက်ထားရ သည့်အခြေအနေသို့ရောက်သွားခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဆရာတော်ဘုရားမှာဝှက်ထား ခံနေရသည့် ဝါးရမ်းပြေးဘဝသို့ ပျံလွန်တော်မူပြီးမှ ရောက်ရှိသွားခဲ့ရသည်။
ရခိုင်ပြည်မြို့တော်ဖြစ်သည့် စစ်တွေမြို့တွင်အသျှင်ဥတ္တမကြေးရုပ်နှင့် ပန်းခြံ
ရှိပါသည်။ ယင်းပန်းခြံကို ဦးခေမာစာရ က ပုံဖော်ထားပုံကိုကြည့်ပါ----
“ဒီလောက်တောထူတဲ့ နေရာမှာ ကျားအဆွဲမခံရတာကို အင်မတန်ကံကောင်းတဲ့
မုဆိုးလို့တွေးမိခဲ့လို့ပါ။ဆရာတော် ဦးဥတ္တမဟာ နယ်နယ်ရရပုဂ္ဂိုလ် မဟုတ်ပါဘူး၊
တကယ့် ကျားကျားယားယားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပါ။ ယနေ့ကာလမှာတော့ ကဇာတ်ရုံ
ခန်းမတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။နေ့ကလေးထိန်းကျောင်း၊ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးရုံး၊ ယင်းရုံးကငှားစားထားသည့် ဓာတ်ပုံဆိုင် ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါသေးသည်။ဆရာတော်ဦးခေမာစာရက-အသက် ၁၉/၂ဝ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမဆိုတာကို ပိုပြီးအသိအမှတ်ပြုလာခဲ့မိတယ်။ ဟိုတုန်းကမူလတန်းစာအုပ်ကလေးမှာဖော်ပြထားတာဖတ်ပြီး၊ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမရဲ့ စိတ်ဓာတ်သန္ဓေတည်ခဲ့ရသလို......လို့ ရေးထားပါသည်။ စတုတ္တတန်းမြန်မာ့သမိုင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပြဌာန်း ခဲ့သော်လည်းယခု မပါရှိတော့ပါ။
လ ၉ ရက်နေ့ ရောက်တိုင်း ဆရာတော် အသျှင်ဥတ္တမနေ့အခမ်းအနားကို မပျက်
မကွက်ကျင်းပလာခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၂ဝ၁၃ခုနှစ်ဇွန်လက ဂျပန်-မြန်မာချစ်
နှစ်(၁ဝဝ)ပြည့်အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပြီး၊ ၂ဝ၁၃ခု စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှကြီးမှူးပြီး စိန်ရတုအကြို (၇၄)နှစ်မြောက် ဦးဥတ္တမနေ့အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့မင်းဓမ္မလမ်းရှိ MCC ခန်းမ ကြီးတွင်စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်း ပခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။အဆိုပါအခမ်း အနားမှ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ် တောင်ဘက်ခြမ်းရှိ ဦးဥတ္တမပန်းခြံအား ကန်တော်မင်္ဂလာ ပန်းခြံအဖြစ်အမည်ပြောင်းထားသည်ကို ဦးဥတ္တမပန်းခြံအဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုသည့် အဆိုတစ်ရပ်ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ကာလမှာဒီမိုကရေစီ
နိုင်ငံတော်အဖြစ်ပုံဖော်နေသည့်ကာလဖြစ်ရာ နိုင်ငံတော်ကလည်း ဆရာတော်အပေါ်ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်မည့်အရိပ်လက္ခဏာများတွေ့မြင်နေရသည်ဟု နိုင်ငံတော်ပိုင်းနှင့်နီးစပ်သူတစ်ချို့ကပြောပြ၍ ဝမ်းသာစရာဖြစ်သည်။
ကြေးရုပ်သွန်းလောင်းပြီးစီးကြောင်းသတင်းဖြစ်သည်။ ဆရာတော်၏ရုပ်တုနှင့်ပန်းခြံ များသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင်(၅)ခုတွင်ဖြစ်ပေါ်လာမည် ဆိုပါကလည်း ဆရာတော်သည် ကံကောင်းလာပြီဟု ကမ္ဗည်းတင်ရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့၊မြန်မာပြည်သူ
ပြည်သားများသည်လည်း ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူကို ကျေးဇူးတင် တတ်ကြလေပြီဟု
ဝမ်းသာအားရ ချီးမွှမ်းထောပနာပြုကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ဆိုစေ ရခိုင်ပြည်
နယ်ရှိ(၁၇)မြို့နယ်နှင့်မြို့အားလုံးတွင်ရုပ်တုနှင့်ပန်းခြံများမဖြစ်ပေါ်လာသေးသည့် တိုင်ခရိုင်မြို့(၅)ခုတွင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါစေ၊(၇၅)နှစ်မြောက်စိန်ရတု အခမ်းအနားကိုမြို့နယ်တိုင်း၊မြို့တိုင်းတွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားနိုင်ကြပါစေ လို့ဆုတောင်း ယင်း(၇၅)နှစ်မြောက်